मनोरंजन – Page2– shubhabihani
‘बाख्राको जस्तो स्वर’ भन्दै गायनबाट निकालिएको थियो साकिरालार्इ
विश्वप्रसिद्ध पपगायिका साकिराको गीत र स्वर मन नपराउने संगीतप्रेमी सायदै होलान् । पृथक् गायन शैली र दमदार स्टेज प्रस्तुतिका कारण उनका फ्यान संसारभर छन् । कुनै समय उनलाई ‘स्वर राम्रो छैन’ भनेर गायन प्रतियोगिताबाट निकालिएको थियो भन्दा पत्याउन गाह्रो पर्छ । तर यो सत्यको खुलासा साकिराले नै गरेकी छन् ।
साकिरा ११ वर्षको हुँदा विद्यालयमा भएको समूह गायन प्रतियोगितामा भाग लिन गएको बेला संगीतका शिक्षकले ‘बाख्राको जस्तो आवाज’ भन्दै साकिरालाई समूहबाट निकालेका थिए । तर गायनबाट करियर बनाउने दृढ संकल्पका साथ अगाडि बढेकी उनी यस्ता ‘रेजेक्सन’को बेवास्ता गर्दै अगाडि बढेकाले अहिले विश्वसंगीतमा सफलताको चुचुरो चुमेकी हुन् ।
सो घटनाबाट त्यतिबेला आफूलाई निकै लज्जा महसुस भए पनि हतोत्साही नभएको उनले हालै एक अन्तर्वार्तामा खुलासा गरेकी हुन् । पाँच वर्षको उमेरदेखि गाउन थालेको र संगीतबाहेक जीवनमा अर्को विकल्प नदेखेकाले अहिले यो स्थानसम्म आउन सकेको उनले बताएकी छन् । आठ वर्षको उमेरमा आफ्नो पहिलो गीत लेखेकी उनलाई बाबुले ‘तिमी राम्रो गाउँछ्यौ, कसैको कुरा नसुन’ भन्दै सम्झाउने गर्थे ।
शिक्षकले उनले आवाज बाख्राको जस्तो आवाज निकालेको आरोप लगाउँदा साकिरालाई आश्चर्य लाग्नुका साथै केही समय ‘ठीकै भनेको होला’ भन्ने पनि लागेको थियो । तर गायनमा आफ्नो आत्मविश्वास र स्वमूल्यांकनबाट त्यो गलत भएको र गाउन सक्छु भन्ने विश्वास भएकाले आफू हतोत्साही नभएको उनले बताएकी छन् । एजेन्सी
बिवाह गर्नु भन्दा नगर्नु राम्रो, एकल जीवन उत्तम हुन्छ- विज्ञानले यसै भन्छ र यसका कारण यस्ता छन
जापानमा जीतुले फेसबुक प्रयोग गर्न नजान्दा आउने समस्या माथि ब्यङ्ग्य गर्दा…….
ग्रिस्मा इन्टरटेन्मेन्ट र सुर्य कर्पोरेसनले जापानमा ‘साकुरा नाइट’ भव्य रुपमा सम्पन्न गरेको छ । गोल्डेन विकको अवसर पारेर यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । फुकुओका स्थित च्युओ सिमिन सेन्टर हलमा नेपालबाट गएका चर्चित कलाकारले मनोरञ्जन दिने काम गरे ।
नेपालका ख्यातीप्राप्त गायक रामकृष्ण ढकालको साथमा हिमाल सागर र गायिका मिलन अमात्यले दर्शकलाई झुमाएका थिए । हिमाल र मिलनले गीत गाउँदा दर्शकले वन्स मोर भनेका थिए । यस्तै, हाँस्य कलाकार जीतु नेपालले फेसबुकलाई सदुपयोग गर्न नसक्दाको कमेडीले दर्शकलाई खुबै हसाँयो । उनले अन्य रोचक र घोचक कमेडी पस्किए । संचारकर्मी नरेश भट्टराइले कार्यक्रमको उद्घोषण गरेका थिए ।
विभिन्न चर्चित कलाकारको साथमा ग्रिस्मा इन्टरटेन्मेन्टले विदेशी भूमिमा कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ । कार्यक्रममा गि्रस्माका प्रमुख गृहेन्द्र घिमिरे पनि सहभागी थिए ।
अष्ट्रेलियामा सन्तोष र रश्नाको यस्तो प्रेम मोह भिडियो सहित
अष्ट्रेलिमा संचालनमा आएको राड स्टूडियोले नयाँ गीत तयार पारेको छ । ‘तिमी भित्र’ बोलको गीतमा निमुखा युवराजको शब्द छ । यो स्टूडियोमा राजेश घिमिरे र सरोज परियार आवद्ध छन् ।
डिजिटल की प्रोडक्शन सिड्नी र मोक्ष प्रोडक्शनको प्रस्तुतीमा यो म्यूजिक भिडियो तयार पारिएको हो । सौरम मानन्धरले यो गीतको भिडियोलाई छायांकन तथा निर्देशन गरेका छन् । मोक्ष प्रोडक्शनका प्रविण श्रेष्ठले भिडियोको सम्पादन गरेका हुन् ।
भिडियोमा सन्तोष कुमार श्रेष्ठ र रश्ना प्रधानले मोडलिङ गरेका छन् । अष्ट्रेलियामा रहँदै आउका सन्तोष कुमारले त्यहाँ फिटनेशनको तालिम पनि दिने गरेका छन् । उनले केही अन्तरराष्ट्रिय फिटनेश प्रतियोगीतमा स्वर्ण पदक पनि जितेका छन् । यस्तै, मोडल रश्नाले पनि नेपालमा विभिन्न र्‍याम्पमा मोडलिङ र टेलिभिजन विज्ञापनमा काम गरेकी थिइन् ।
यो टिमले तयार पारेको भिडियोलाई उत्कृष्ट बनाइएको छ । गीतको भाव अनुसार गीतलाई ढालिएको छ ।
मुस्ताङ, नेवारी खाना र मरिचमान सिंह अशिष्मा नकर्मीलाई के-के मनपर्छ ?
कार्तिक १६, २०७२- नायिका अशिष्मा नकर्मी यति बेला प्रदर्शनरत फिल्म ‘अधकट्टी’ को गीत ‘मेरो फिगर कोकाकोला…’ मार्फत फिल्मी दर्शकमा बढी चिनिइन्। उनी त्यसअघि नै नेवारी फिल्मका दर्शकमाझ परिचित कलाकार हुन्। अभिनयमा दत्तचित्त अशिष्मा पछिल्लो समय निर्देशककी मनपर्ने नायिकामा पर्छिन्। उनलाई चाहिँ के मनपर्छ त?
अहिलेसम्म पुगेका गाउँमध्ये मन परेको त मुस्ताङ नै हो। नेपाललाई स्वर्ग भनिन्छ। त्यहाँ पुगेपछि बल्ल फिल भयो। सुन्दर क्षितिज, ताल, हिमाल सबैको सम्मिश्रण नै त्यही भएकाले नेपालको स्वर्ग नै मुस्ताङ हो जस्तो लाग्यो।
युरोप मलाई एकदमै मनपर्छ। आइफल टावर हेर्ने ठूलो इच्छा थियो, त्यो पूरा भयो। अब जान मन लागेको ठाउँ अस्ट्रेलिया हो।
नेवारी खाना मनपर्छ। तर म धेरै पिरो खान सक्दिनँ। त्यसैले नेवारीबाहेक जापनिज, कोरियन खाना मनपर्छ। किनकि ती खानामा अलिक स्पाइसी कम हुन्छ।
किन किन मलाई साडी, लेहेंगा नै मनपर्छ। दैनिक रूपमा त म क्याजुअल पाइन्ट, सर्ट नै लगाउँछु। तर अकेजनल्ली साडी, लेहेंगा लगाइरहेकी हुन्छु।
हाम्रो सडकको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा सजिलो त स्कुटर नै हो। मसँग पनि स्कुटर नै छ, त्यही मनपर्छ। ड्याडीले सधैं गाडी किन भन्नुहुन्छ। पैसा पनि दिइसक्नुभएको छ। उहाँको इच्छा पूरा गर्न लिन पनि सक्छु। तर जब मेरो कमाइ बलियो हुन्छ र मेन्टेन गर्न सक्ने हुन्छु तब मात्रै लिन्छु। अहिले पाँच सयले हुन्छ भने गाडी भएपछि पाँच हजार रुपैयाँले पनि नपुग्ला।
फिल्म कि म्युजिक भिडियो?
दुवै उत्तिकै मनपर्छ। खासमा मलाई अभिनय मनपर्ने भएकाले फिल्म, सर्टफिल्मको होस् वा म्युजिक भिडियोको, सबै मनपर्छ।
नेवारी फिल्म कि नेपाली फिल्म?
दुवै। नेवारी फिल्म मेरो पहिचान हो भने नेपाली फिल्मले मलाई अशिष्मा भनेर अलि बृहत् रूपमा चिनाएको छ। दुईमध्ये कुन रोज्ने भन्नु भनेको कुन चाहिँ आँखा फुटाउने भनेर सोधे जस्तै हो मेरा लागि।
लभस्टोरी र त्यसपछि कमेडी फिल्म मनपर्छ। ऐतिहासिक फिल्म पनि हेर्न मनपर्छ। विदेशी फिल्ममा ‘अ वक टु रिमेम्बर’ मनपर्छ भने नेपाली फिल्ममा ‘प्रेमपिण्ड’ र ‘कुसुमे रुमाल’।
अहिलेसम्म मनपर्ने एक्टर मेरा लागि त मह जोडी (मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य) नै हुनुहुन्छ।
मिथिला शर्मा र गौरी मल्ल।
म त्यस्तो साहित्यको पाठक त होइन। तर पढेकामध्ये एकदम मन परेको भनेको ‘द सेक्रेट’ पुस्तक हो।
मरिचमान सिंह। अहिलेको अवस्थामा आएर बुझदा देशलाई चाहिने नेता भनेको उहाँ नै हो जस्तो लाग्यो। अहिले हामीलाई राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षाका लागि मरिचमान जस्तो नेता चाहिएको छ।
ईन्डीयाको भर नपरम चाईना तिरै जाम
कतारको स्टुडीयोमा रेकर्ड भएको समय सान्दभिक गीत मार्फत कलाकार यूवराज छन्त्याल , राधिका हमाल र देविका के सी आफ्नो आवजलाई बुलन्द बनाऊन लागी परेका छन । यूवराज छन्त्याल को लय तथा शब्दमा रहेको यस गीतमा यूवराज छन्त्याल , राधिका हमाल र देविका के सीको आवाज रहेको छ । मिलिजुली बसम अब बाडिचुडी खाउ, नुन र तेल लिनलाइ चाइना तिर जाउ भन्ने शब्दमा रेकर्ड गरिएको ऊक्त गीत मिक्सीङको लागी नेपाल पठाईएको जानकारी गायीका देवीका केसी बाट प्राप्त भएको छ । च्यानलएनपी डट कमलाई प्राप्त भएको यो छोटो अडीयो क्लीप सुन्नुहोस्
गरिमाको रोटेपिङमा कपाल बेरियो, नन्दिताले टाट बनाइन् फुपुलाई
नेपालीहरुले दसैं मनाइरहेका छन् । तर, यसपटक भने दसैंमा नेपालीलाई इन्धन र ग्यास जोड्ने चपेटाले नै हैरान बनाएको छ । सायद, यसैले पनि होला यसपटकको दसैंमा गतबर्षको जस्तो उमंग देखिएन । तर, पनि नेपाली चलचित्रका कलाकारहरुले आफ्नो अविस्मरणिय दसैंलाई यसरी संझिएका छन् ।
रोटेपिङमा कपाल बेरियोः गरिमा पन्त
अहिले पनि मलाई अरुले पीङ खेलेको देख्दा आङ सिरिङ्ग भएर आउँछ । डोरी पिङमा त म पनि रमाइलो गर्छु । तर, रोटेपिङ सम्झदै कहाली लागेर आउँछ ।
मेरो घर तनँहुमा हरेक दसैंमा रोटे पिङ हाल्ने चलन थियो । हामीहरु साथी साथी मिलेर रोटेपिङ खेल्न जान्थ्यौं । म १३ वर्षकी थिएँ । पीङ खेल्दा खेल्दै मेरो कपाल बेरियो । म जोडले चिच्याएर रोएँ । हत्त न पत्त पिङ रोकेर मलाई पिङवाट ओराल्नु भयो ।
त्यो घटना म कहिल्यै बिर्सन्न । अहिले सम्झन्छु, तीस सेकेण्ड मात्रै ढिला भएको भए जे पनि हुन्थ्यो ।
मुगु बस्दा घर सम्झिँएः बेनिषा
पोहोर साल चलचित्र ‘कालोपोथी’ को सुटिङ गर्दा मुगुमै दसैं मनाएँ । सुटिङ युनिटमा संलग्न धेरै साथीहरु रमाईला थिए तर, पनि घरको याद आउँदो रहेछ । म त चितवनको मान्छे । हाम्रो घरतिर ठूलाले सानालाई टिका लगाएर आर्शिवाद दिने चलन हुन्छ । तर, मुगुतीर सबैले पालै पालो टिका लगाईदिने चलन देखेर नौलो अनुभुती भएको थियो ।
आफ्नै फुपुलाई टाट बनाएँः नन्दीता केसी
हरेक वर्ष म दसैंमा घर अर्घाखाची नै जान्छु । प्राय यस्ता चाडमा हामी तास खेलेर रमाईलो गर्छौं । प्राय म फुपूसँग तास खेल्छु । तर, आजसम्म मलाई फुपुले जित्न सक्नु भएको छैन । हरेक वर्ष कम्तिमा पनि दश हजार रुपैयाँ फुपुको पैसा मैले मारेकै हुन्छु । हामी घरमै म्यारिज खेल्छौं । उधारो हुन्न हाताहाती खेल्ने चलन छ ।
बिजया दशमी को शुभकामना
बिजया दशमी को पावन अबसर मा सम्पूर्ण नेपालि आमा बुवा दाजु भाइ तथा दिदि बहिनि मा शुभबिहानी .com को तर्फ बाट हार्दिक मंगल मय शुभकामना टक्र्याउन चाहान्छु |बिजया दसमी ले सबै को घर मा हासो खुसि र उमंग ल्याओस फेरी पनि बिजया दशमी को शुभकामना